'Imiphakathi izohlupheka uma kuxoshwa abangcwabi bezinkampani zamaNdiya nabamhlophe' | News24
'Imiphakathi izohlupheka uma kuxoshwa abangcwabi bezinkampani zamaNdiya nabamhlophe'
Durban - Isiphakamiso sakamuva seNational Funeral Practitioners Association of South Africa sokuthi abangcwabi bezinkampani zabamhlophe nezamaNdiya bangasavunyelwa ukusebenza emiphakathini yabantu abamnyama, sesithole ukugxekwa.
Lesi siphakamiso kuthiwa sizoqala ukusebenza ngomhlaka-1 Febhuwari 2018.
Inkampani edumile yabangcwabi, i-AVBOB, isiphawulile kulandela ukuzwakala kwalezi zindaba yagxeka uNobhala Jikelele weNafupa SA uNkosentsha Shezi ngalesi siphakamiso.
"Inkulumo kaShezi itshengisa ubudedengu ngoba okokuqala nje, sikholelwa ekutheni indlela uMnu Shezi nenhlangano yakhe abachaza ngayo lesi simo ayigcini ngokukha phezulu, kodwa igcina ngokungavezi okuyiqiniso emikhakheni eminingi," kusho uMarius du Plessis, okhulumela i-AVBOB.
Le nkampani iqhuba ngokuthi lo mnyakazo awugcini nje kuphela ngokufinyeza ilungelo labathengi lokuzikhethela, kepha ungaholela emiphumeleni eyingozi kakhulu kwezomnotho.
OLUNYE UDABA: Sifuna ukuthuthukisa amabhizinisi abansundu emalokishini, imali ihlale khona
UShezi ekhuluma ohlelweni Indaba with Alex kwiGagasi FM ngoLwesine kusihlwa uveze ukuthi lokhu bakwenzela ukuthi umnotho wabantu abamnyama uhlale kubo, ungaphumeli ngaphandle.
Uqhube ngokuthi uma abantu abanemishwalense nomasingcwabisane ezinkampanini zabelungu namaNdiya beshonelwa, kuzomele bacele ukunikezwa isamba semali bese umsebenzi wokungcwaba uthwalwa yizinkampani zabantu abamnyama.
Uthi ukusho lokhu ngoba amaNdiya nabelungu bangena emalokishini kuphela uma bezothatha imali yabantu abamnyama.
I-AVBOB nayo ithi indlela le nkampani eyakhiwa ngayo isimamisa osomabhizinisi babantu abamnyama ngokubahlinzeka ngengqalasizinda, amasu nokuqeqeshwa uma bengena kulo mkhakha.
"Lokhu kwenza ukuthi bakwazi ukusebenza bezimele noma ngohlelo lokuxhaswa futhi bayasiza ekwehliseni izinga lokuntuleka kwemisebenzi ngokuthi baqashe abantu abaqhamuka emiphakathini yangasemakubo," kuqhuba uDu Plessis.
Uqhube ngokuthi lezi zinsongo zeNafupa SA zibeka engcupheni ikusasa lalabo somabhizinisi abaziphilisa ngalo msebenzi.
Uthe bona bakholelwa ekutheni imisebenzi yomuntu yiyo emkhulumelayo, ngakho-ke kuhle ukuthi abantu bavunyelwe ukuba bazikhethele izinkampani abafuna ukusebenzisana nazo.